UMUNO ole ka ụmụ amaala nwere ike ịnwe
Etu iwu obodo 62nd nke Iwu nke Russian Federation na-achịkwa ikike ụmụ amaala ole na Russia. Iwu Basic anaghị egbochi ọtụtụ ụmụ amaala. Enweghị okwu kwekọrọ na njikwa iwu.
Mmadu ole ka nwa amaala nwere?
Iwu nke Russian Federation amachighị ụmụ amaala ya n'ọnụọgụ nwa amaala enwetara. Na Ukraine, mmachibido iwu na paspọtụ nke abụọ dị, mana enwere ụzọ iji gbaa ha gburugburu. Na Kazakhstan, a na-achịkwa mpaghara a karịa.
Mmadu ole ka enyere obodo ROSSIA?
Etu iwu obodo 62nd nke Iwu nke Russian Federation na-achịkwa ikike ụmụ amaala ole na Russia. Iwu Basic anaghị egbochi ọtụtụ ụmụ amaala. Enweghị okwu kwekọrọ na njikwa iwu. Ndị Russia nwere nnwere onwe ime nhọrọ zuru oke. Ugboro ole ka mmadụ nwere ike inwe, onye ọ bụla na-ekpebi ihe ọ ga-eme, dabere na ọchịchọ na mkpa nke ha. Nanị ihe achọrọ maka steeti bụ ịkọ ọkwa ọhụụ na ọrụ Mbugharị ọ bụla karịa ụbọchị 60 mgbe emechara.
Mmadu ole ka bara uru na obodo UK I nwere ike inwe?
Azịza nye ajụjụ banyere mmadụ ole ụmụ amaala mmadụ ga-enwe na Ukraine bụ nke doro anya na enweghị atụ - otu, onye Ukraine. Iwu obodo machibidoro ọtụtụ ụmụ amaala.
Mana n'obodo a, mmadụ ole ị nwere ike ịbụ, onye ọ bụla na-ekpebi ihe ọ ga-eme. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịta ndị dara iwu ahụhụ n'ihi enweghị usoro.
Ma ọ ga - ekwe omume inwe akwụkwọ ikike ngafe 2 ma ọ bụ ọbụlagodi ịbụ nwa afọ atọ - ọ dabere na ike onye ahụ. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị mba niile ka ọ dị mkpa ịgwa Ukraine na nwa amaala ya anatala paspọtụ ọzọ.
Ọ na-anọgide na-amụ n'ụzọ zuru ezu ụdị ụmụ amaala bụ, ma jiri ohere ọhụụ meghere emeghe.
Enwere ike ịnweta ụmụ amaala abụọ na KAZAKHSTAN?
Uzo ole ka ị nwere ike bi na Kazakhstan bụ nke Iwu kwadoro, isiokwu nke 10 nke Iwu Basic. Ndị dara iwu nwere ikike ịkwụ ụgwọ na ịchụpụ ha mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere nwa amaala nke Kazakhstan, a ga-atụle mkpebi gị maka ịbụ nwa amaala ma tụlee ya.
↑ obodo ole ka I nwere ike inwe ↑ kedu ka esi ewere ikike nwa amaala ↑ mmadụ ole ka enyere ikike ịbụ nwa amaala na Russia ↑ otú ọtụtụ ụmụ amaala na-ekwe na Ukraine ↑ mmadụ ole ka enyere ikike ịbụ nwaafọ na Kazakhstan ↑ Russia ụmụ amaala abụọ ↑ Ukraine sọrọ ụmụ amaala ↑ Kazakhstan ụmụ amaala abụọ ↑ Russia abụọ ụmụ amaala ↑ Ukraine abụọ ụmụ amaala ↑ Kazakhstan abụọ ụmụ amaala ↑ nwere ikike ịbụ nwa amaala abụọ ↑ Nke abụọ ịbụ nwa amaala kwere ↑ ezi nwa amaala ↑ nke abụọ ịbụ nwa amaala ↑